विक्रेतासँग सही तर्क | गृहपृष्ठ
Home Uncategorized विक्रेतासँग सही तर्क
विक्रेतासँग सही तर्क
बजारबाट किनिएको सामन खराब वा त्रुटिपूर्ण भएर पसलमा गुनासो गर्न जाँदा कुनै व्यापारीले तपाईंको कुरै नसुनी त्यसै फर्काइदिएको छ ? त्यस्तो बेला तपाईं के गर्नुहुन्छ ? कतै उजुरी गर्नुहुन्छ कि चुपचाप बस्नुहुन्छ ? तपाईंले मूल्य तिरेको कुनै पनि वस्तु पूर्ण तौल भएको, म्याद ननाघेको, टुटफुट नभएको र सिल नतोडिएको भए पसलेले फिर्ता लिनुपर्छ ।
यस्ता कुराहरूमा तपाईंलाई साथ दिनका लागि सरकारले उपभोक्ता अधिकार लागू गरेको छ । यससम्बन्धी सरकारी बजारमा सामान किन्दा के कुरामा ख्याल पुर्याउनुपर्ने हो, त्यसको जानकारी दिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले नेपाली जनतालाई ६ ओटा अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा उपभोक्ताको जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु विक्रीवितरण गर्न पाइँदैन । व्यापारीको अनुचित क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनका निमित्त उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तरबाट सूचित हुने अधिकार उपभोक्तालाई छ । त्यसैगरी, यथासम्भव प्रतिस्पर्धा मूल्यमा उपभोग्य वस्तुको छनोट गर्ने, तपाईंको पिरमर्का उपयुक्त निकायबाट सुनुवाइ हुने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा हुने शोषण र मर्काविरुद्ध उजुरी हाल्न सक्ने अधिकार पनि तपाईंलाई छ ।
कानूनद्वारा संरक्षित आधारभूत उपभोक्ता अधिकार व्यापारीहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । तर, तपाईं आफ्ना अधिकारबारे जानकार हुनुहुन्न भने ठगिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बेलायतजस्ता विश्वका धेरै मुलुकमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने कर्मचारीलाई काम शुरू गर्नुभन्दा अघि उपभोक्ता अधिकार कानूनका बारेमा राम्रो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ । यो अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पनि हो । भारतमा पनि यसको शुरुआत भइसकेको छ ।
पसलका कर्मचारी उपभोक्ता अधिकारबारे जानकार छन् कि छैनन् त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस् । छैनन् भने नम्रपूर्वक उनीहरूलाई जानकारी दिनुहोस् । यूरोपियन मुलुकजस्तै भारतले पनि उपभोक्ता नठगिऊन भनेर जिल्ला नगर र गाउँ पञ्चायतमा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेको छ । आफू ठगिएको थाहा पाएमा उपभोक्ता अदालतमा गएर सोझै उजुरी हाल्न सक्छन् । तर, नेपालमा उपभोक्ता अदालतको प्रयाससमेत थालिएको छैन ।
उपभोक्ताले ख्याल गर्नुपर्नेः
खरीद गरेको कुनै सामान बिग्रेको वा त्रुटिपूर्ण भएको थाहा पाउनासाथ सकेसम्म उक्त सामान छिटो पसलेलाई फर्काउनुस् । जति ढिलो गर्नुहुन्छ, त्यति नै सामान फर्काउन गाह्रो हुन्छ । सामान फिर्ता गर्दा व्यापारीसँग सही तर्क गर्नुस् । तपाईंको तर्कले अर्कोपटक ऊ सचेत हुन सक्छ । तपाईंले ५० हजार रुपैयाँमा किनेको एलसीडी टिभी ६ महीनाभित्र बिग्रेमा त्यसको पैसा फिर्ता वा सित्तैमा मर्मत पाउनु जुनसुकै तर्क वा नियमबाट पनि तपाईंको अधिकार हुन्छ । तर, ५ सय रुपैयाँमा किनेको रिचार्जेबल टर्च त्यस्तै भएर बिग्रेमा व्यापारीले साटिदिन वा सित्तैमा मर्मत नगरिदिन सक्छन् । तैपनि कम मूल्यको सामान भनेर वारेण्टी वा ग्यारेण्टी रसिद लिन नछुटाउनुस् । रसिद देखाएर तपाईंले बिग्रेको सामानको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ ।
लुगाहरू खरीद गर्दा गलत साइज भएमा साट्न सकिहालिन्छ भनेर नसोच्नुहोस् । विशेष गरी अरूका लागि लुगा खरीद गर्दा प्रायः यस्तो हुन सक्छ । कतिपय पसलेले साटिदिन सक्छन् तर कतिपयले भने साटिदिनु पर्ने बाध्यता नभएको भनेर फर्काउन पनि सक्छन् । कसैलाई उपहार दिँदा सामानको रसीदमा आफूले उपहार दिएको व्यक्तिको नाम लेख्नुहोस् । त्यसले गर्दा तपाईंले उपहार दिएको व्यक्तिले नै सामान साट्न सक्छन् ।
यदि तपाईं अनलाइनबाट सामान खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो सामान साटिँदैन भनेर नसोच्नुहोस् । अनलाइन सामानको खरीदविक्रीको छुट्टै नियम भएकाले त्यससम्बन्धमा उपभोक्ता अधिकारहरू अझ बढी हुने गर्छन् । सामन खरीद गर्दा ‘अनुकूलता’ पनि जाँच गर्नुहोस् । जस्तैः तपाईंले खरीद गरेको कुनै साउण्ड स्पिकर तपाईंको घरमा रहेको टलिभिजनमा फिट भएन भने तपाई उक्त सामान साट्न सक्नुहुन्छ । तर, तपाईंले टेलिभिजन र स्पिकरको जडान मिलाउन नसक्नु भएको हो भने त्यसमा व्यापारी नभई तपाइं नै जिम्वेवार हुनुहुन्छ । सामान खरीद गर्दा सकेसम्म रसिद लिने गर्नुहोस् । कतिपय व्यापारीले रसिद दिन आनकानी गर्न सक्छन् तर सामानसँगै रसिद लिनु उपभोक्ताको अधिकार भएको कुरा व्यापारीलाई सम्झाउनुहोस् ।
उत्पादकलाई होइन, जहाँबाट खरीद गर्नुभएको हो त्यहीँ फिर्ता गर्नुहोस् । कतिपय अवस्थामा भने व्यापारीहरूले आफ्नो साख नगुमोस् भन्नका लागि कानूनी प्रावधान नभए तापनि प्रतिष्ठाकै लागि सामानहरू फिर्ता गर्न वा साटिदिन वा मर्मत गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सभ्य र नम्र भाषामा आफ्नो सामान बिग्रेरेर वा फुटेर काम नलाग्ने भएको बताउनुहोस् ।